အကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်တင်သွင်းအသံ Editor ကိုမာတင် Hernandez နှင့်အတူရုပ်ရှင်မီဒီယာအသင်းများအသံန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်မှ - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » အကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်တင်သွင်းအသံ Editor ကိုမာတင် Hernandez နှင့်အတူရုပ်ရှင်မီဒီယာအသင်းများအသံန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်မှ
အကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်တင်သွင်းအသံ Editor ကိုမာတင် Hernandez နှင့်အတူရုပ်ရှင်မီဒီယာအသင်းများအသံန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်မှ
Post ကိုအိမျတျောကိုမက္ကစီကိုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာခြောက် State-Of-The-Art သံကိုအဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
မက္ကဆီကို CITY-ရုပ်ရှင်ရုံမီဒီယာ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မက္ကစီကိုစီးတီး၏အကြီးဆုံး full-service ကို Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှစ်ခုသည်အချိန်နှင့်အတူ teaming ဖြစ်ပါတယ် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ရောက်စေဖို့အသံကအယ်ဒီတာ Martin Hernandez ကြီးကြပ် -nominated ဟောလိဝုဒ်မက္ကစီကိုမှသံကိုန်ဆောင်မှု -caliber ။ Hernandez, ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ဘို့အသံကကြီးကြပ်ရေးမှူး အဆိုပါ Revenant, Birdman နှင့် ပန်ရဲ့ Labyrinth, ရုပ်ရှင်ရုံမီဒီယာမှာအသစ်တခုသံကိုကွဲပြားခြင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာပြီးပြည့်စုံသောကြောင့် State-Of-The-Art နှင့်အတူအသီးအသီးကိုခြောက်သံကိုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ရောစပ်အဆင့်မည်ဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော Dolby Atmos သံကိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Pro ကို Tools များစနစ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ။ ဆောက်လုပ်ရေးဇူလိုင်လအတွင်းကိုလက်စသတ်လိမ့်မည်။
အသစ်သောအသံအရင်းအမြစ်များကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရွေ့လျားမှုပုံထဲမှာပေါက်ကွဲမှုနှင့်မက္ကစီကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုဆီသို့ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်။ အများအပြားကအမေရိကန်အခြေစိုက်စတူဒီယိုနှင့် streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုယခုလက်တင်အမေရိကနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များအတွက်မက္ကဆီကိုရှိ content တွေကိုထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံမီဒီယာရဲ့ဖန်တီးမှုသံကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လတံ့သော Hernandez, ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းလွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားမျိုးစုံရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများအတွက်အသစ်ကအာကာသတည်းဖြတ်သောအသံအတွက်အလုပ်မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
နယူးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးရလဒ်အဖြစ်, သူတို့ကခေတ်မီ Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကိုတောင်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီမက္ကစီကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, လျက်ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်မီဒီယာပြီးသားမက္ကစီကိုတွင်အခြေစိုက်ဘဏ်ဍာမှန်ဆောင်မှုပြီးသွားကမ္ဘာ့အဆင့်မီရုပျပုံပေးနေပါသည်။ ၎င်း၏အသစ်သောဌာနခွဲရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံသည်များအတွက်တူညီပြုလိမ့်မည်။
"မက္ကစီကိုအတွက်ယခုဖြစ်ပျက် Productions ဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့စျေးကွက်ဆောင်ခဲ့, ရေးသားခြင်းသရုပ်ဆောင်နှင့် directing, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးပါတယ်" ဟု Hernandez ကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒီမှာပြုသောအမှုကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ Post-ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် drawing နှင့်ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုအတူတူဆွဲနေကြတယ်။ "
ရုပ်ရှင်မီဒီယာရဲ့အသစ်ရောနှောအဆင့်စီမံကိန်းများကိုအချိန်ဇယားဆွဲရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ချောမွေ့စွာသူတို့ကိုအကြားရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြု, အရွယ်အစားတူညီခြင်းနှင့်တူညီတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသံကဒီဇိုင်း, အသံတည်းဖြတ်, Pre-dubbing နှင့်ရောစပ်တက်သည်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဆင့် Dolby Atmos လိုအပ်လိုင်းများနှင့်အရာဝတ္ထုများ၏အရေအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် Focusrite RedNet interfaces feature ပါလိမ့်မယ်။ လွန်စွာလိုလားသော S6 နှင့် လွန်စွာလိုလားသော S3 ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များနှင့့် JBL စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို။
Hernandez ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာ ပို. ပို. နက်ရှိုင်းရုပ်ရှင်တေးသံများလိုအပ်နေကြသည်အဖြစ် Dolby Atmos များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှုမရှိမဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ "Atmos လက်ခံဖို့ရှေးခယျြမှုသိသာခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကမှတ်ချက်ချတယ်။ "ထိုအခါကသငျသညျဖြတ်တောက်ကြသောအခါဒါကြောင့်သင်ပြီးသားကြောင်းဘာသာပြန်ချက်စဉ်းစားနေကြတယ်, ရှေ့ဦးစွာ မှစ. လုပ်ငန်းစဉ်သို့ Atmos ထည့်သွင်းဖို့ကသဘာဝပါပဲ။ ကျနော်တို့ Atmos အတွက် Pre-dubbing နှင့် Atmos format နဲ့ပြီးသွား, Atmos များအတွက်ဖြတ်တောက်, ခြစ်ရာကနေစတင်ပါ။ "
Hernandez အဓိကအားဒေသခံအခွက်တဆယ်နှင့်အတူအသံကွဲပြားခြင်းများကိုဦးဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်လိုအပ်အဖြစ်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာနှင့်ရောနှောအတွက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ "ဒီကမ္ဘာကြီးနေ့တိုင်းသေးငယ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "နည်းပညာပူးပေါင်းနညျးလမျးမြားစှာရရှိ။ ကျွန်မအနေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီးရီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အပေါ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသောကမ္ဘာတဝှမ်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရှိသည်။ "
Hernandez ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအဘို့အဆိုကိုရုပ်ပုံအသံကအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ မိမိအစောပိုငျးတှငျခရက်ဒစ်များထဲတွင်ခဲ့သည် ဘုရားသခငျ၏စီးတီး ဒါရိုက်တာဖာနန်ဒို Meirelles သည်။ သူကအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု Alejandro Iñárritu, အရာနှစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့မကြာခဏပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်လူသိများသည်, အဆိုပါ Revenant နှင့် Birdman, ရလဒ် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် အသံတည်းဖြတ်များအတွက်အမည်စာရင်း။ သူလည်းတစ်ဦး Bafta ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ငါး MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲ (များ၏လက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခငျ၏စီးတီး, ပန်ရဲ့ Labyrinth, Birdman, အဆိုပါ Revenant, Carne y က Arena).
ရုပ်ရှင်မီဒီယာအသံသည်အဆင့်ဆင့်အတူ Estudio GGM, မက္ကစီကိုတွင်အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုအတွင်းတည်ရှိသည်; ထုတ်လုပ်မှုရုံးများ; ကင်မရာများ, အလင်းရောင်နှင့်ချုပ်ကိုင်ငှားရမ်းခြင်း, wardrobe နှင့်-Up လုပ်; နှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့တခြားသယံဇာတများကို။ Estudio GGM အိမ်မှာ Argos Comunicación, Netflix, Viacom, HBO, Telemundo နှင့်အခြားသောအဘို့အရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာနာရီရာပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်ထုတ်လုပ်သူ Epigmenio Ybarra ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စုပေါင်း, သုံးယောက်ကုမ္ပဏီများဇာတ်ညွှန်းထဲကနေပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာအတွက်အားလုံးအရင်းမြစ်များကိုပေး။
ရုပ်ရှင်မီဒီယာမက္ကစီကိုအတွက်သာ Full-service ကို Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Episode ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများအပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဟာသူတို့ရဲ့ရူပါရုံဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးပို့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကူညီရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအခွက်တဆယ်, ဆန်းသစ် workflow နှင့်သာလွန်အင်ဂျင်နီယာပေါင်းစပ်။
အသစ်-built Estudio GGM အတွင်းမက္ကစီကိုစီးတီးမှာတည်ရှိပါတယ်, ရုပ်ရှင်ရုံမီဒီယာလက်တင်အမေရိကတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုစင်တာများတဦး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ post ကိုအသီးအသီးအဆင့်တဆင့်အတွေ့အကြုံရှိလမ်းညွှန်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု Pre-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းမှတဆင့်စီမံကိန်းများကိုထောက်ခံသွားမှာပါ။
ကျနော်တို့စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက်, နောက်ဆုံးနေ့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီစီမံချက်၏ဖန်တီးမှုရှုထောင့်မှ workflow နှင့်ဝန်ဆောင်မှု packages များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်အထူးကု, အယ်ဒီတာများ, colorists, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်များ, QC ပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနက်ရှိုင်းသော, နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံနှင့် excel မှတစ်စိတ်အားထက်သန်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ငါတို့သည်လည်း, clients များချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြု Sohonet မှတစ်ဆင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှု feature ပူးပေါင်းနှင့်စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့်အတူမစိုက် data တွေကိုဝေမျှပါ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မက္ကစီကို post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - အသံတည်းဖြတ်ရေး အသံကရောစပ် လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ	2019-05-16
ယခင်: လူသတ်သမား '' လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ '' မိတ်ဆက်နယူးထုတ်လုပ်မှုဂီတစီးရီးသီချင်းများ
နောက်တစ်ခု: InfoComm 2019: အသံလွှင့် Pix နယူးပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကို, PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ IP ကိုအလေးထားဖော်ပြသည်